Shirka maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka oo maanta lagu wado inuu ka furmo Muqdisho - BBC News Somali
Shirka maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka oo maanta lagu wado inuu ka furmo Muqdisho
28 Oktoobar 2017
Image caption Shir hore oo ay yesheen madaxda maamulada iyo dowladda federaalka
Waxaa maanta lagu wadaa in magaalada Mugdisho uu ka furmo shirka madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya.
Shirkan oo ay horay u iclaamisay dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa daba jooga shir ay dhawaan maamul goboleedyada Soomaaliya ku yesheen magaalada Kismayo, halkaa oo ay kaga dhawaqeen madal ay ku mideysanyihiin maamul goboleedyada Soomaaliya.
Madaxweynaha maamulka Puntland, Cabdiweli Gas oo ah hogaamiyaha madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya aya horay u sheegay inay aqbaleen casuumaada shirka Muqdsiho, ayna sidoo kale ka qeyb galayaan.
Shirkan ayaa waxaa uu noqoqnaya kii ugu horeeyay ee ay yeeshaan madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka tan iyo intii uu soo shaax baxay khilaafka u dhaxeeya labad dhinac.
Lahaanshaha sawirka JUBBALAND STATE
Image caption Madaxda maamul goboleedyada
Waxaana warraku ay sheegayaan in shirkani diirada lagu saari doono arrimo dhowr ah oo ay kamid yihiin xalinta khilaafka u dhaxeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada, dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab, dib udhiska ciidammada Soomaaliya, dib u eegista dastuurka oo horay u baaqday iyo siyaasadda arrimaha dibadda oo ah halka uu ka bilowday khilaafka soo kala dhexgalay maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe kadib markii qaar kamid ah maamulada Soomaaliya ay kasoo horjeysteen go'aanka dhexdhexaadnimada ee ay dowladda dhexe ka qaadatay xasaradaha ka aloosan bariga dhexe.
Qaar kamid ah maamul goboleedyada ayaa ku eedeeyay dowladda dhexe faragelin ay ku heyso maamulada. Waxaana Shirkan oo aan la ogeyn waxa kasoo bixi kara iyo inta maalmood ee uu qaadan doono lagu wadaa inuu ka qeyb galo ra'iisul wasaarha Soomaaliya Xassan Cali Kheyre oo hadda safar shaqo ugu maqan wadanka Turkiga.